1. App Tuya Wifi Smart Circuit Breaker မိတ်ဆက်ခြင်း။
ထုတ်ကုန်သည် သမားရိုးကျ circuit breaker ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် အရာများ၏ အင်တာနက်အတွက် အသိဉာဏ်ရှိသော circuit breaker တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အဝေးထိန်းအဖွင့်နှင့် အပိတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ စက်တွင်းမုဒ်ရွေးချယ်မှု၊ အဖွင့်အချိန်နှင့် အပိတ်ဆက်တင်များ စသည်တို့ပါရှိသည်။
2. Tuya Wifi Smart Circuit Breaker ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ
- အဝေးထိန်းခလုတ်- အဝေးထိန်းခလုတ် ON/OFF၊ အချိန်ချိန်ညှိမှု၊
- ဒေသထိန်းချုပ်မှု- ဒေသအဖွင့်နှင့်အပိတ်၊ မုဒ်ရွေးချယ်မှု။
-Short circuit protection : ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး circuit ချို့ယွင်းပါက အလိုအလျောက် ခရီးစဉ်၊
-Overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု - overvoltage နှင့် undervoltage fault ဖြစ်သောအခါ အလိုအလျောက် လည်ပတ်သွားပါမည်။ ၎င်းသည် overvoltage နှင့် undervoltage threshold ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး အဖွင့်နှင့်အပိတ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။
-Overtemperature protection - အပူချိန်လွန်သောအခါ အလိုအလျောက် လည်ပတ်သွားပါမည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်လွန်ကဲမှုနှင့် ဖိအားများ၏ တံခါးခုံကို သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သည်။
-Metering လုပ်ဆောင်ချက်- ဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် ပါဝါတို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကို တိုင်းတာခြင်း။
- ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်- RS485 ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ်၊ စံ Modbus ပရိုတိုကောကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
- အမှီအခိုကင်းသော ပါဝါထောက်ပံ့မှု (တံခါးပေါက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းပါမည်)။
3. Tuya Wifi Smart Circuit Breaker ၏ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များ
ဝင်ရိုးစွန်းနံပါတ် 1P, 2P,3P, 4P
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 220V/380V
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ :16၊ 20၊ 25၊ 32၊ 40၊ 50၊ 63၊ 80၊ 100A
Mechanical life (0~C) တစ်သောင်းနှစ်ထောင်
4. App Tuya Wifi Smart Circuit Breaker ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
-Poles နံပါတ်- 1P,2P,3P,4P
- လက်ရှိ lcs=lcuâ‰¤6000A lcs=lcuâ‰¤6000A ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း
-ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်- လူကိုယ်တိုင်နှင့် အလိုအလျောက် စမတ်ထိန်းချုပ်မှု
-Rated ဗို့အား: 220/230V 380/400V
-Rated လက်ရှိ 10,16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A
- ဆက်သွယ်မှုမုဒ် RS485/Modbus
-Tripping လက္ခဏာများ : Type C instantaneous trip
လက်ရှိ 5-10in Type C ချက်ချင်းခရီး
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- 40ºC~70ºC – 40ºC~70ºC
ဝါယာရှော့ကာကွယ်မှု ပါဝါပိတ်ချိန် â‰¤ 0.04s
hot Tags:: အက်ပ် Tuya Wifi Smart Circuit Breaker၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်